Guuleed ayaa sheegay inay si mug leh ugu diyaar garoobeen difaaca xaqqa soo jireenka ah ee xuduud biyoodka… – Hagaag.com
Guuleed ayaa sheegay inay si mug leh ugu diyaar garoobeen difaaca xaqqa soo jireenka ah ee xuduud biyoodka…
Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Somalia, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa sheegay in Dowladda Somalia ay soo dhaweynayso go’aanka kama dambeysta ah ee Maxkamadda Adduunku ku laashay codsigii Kenya ay ku dooneysay in mar kale dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda.
Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka ayaa sheegay in shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed ay si mug leh ugu diyaargaroobeen in ay difaacdaan xaqooda soo jireenka ah ee xuduud biyoodka ay la wadaagaan dalka Kenya, iyadoo lagu ballansan yahay in dhageysiga dacwadda ay qabato Maxkamadda ICJ 15-19 bisha soo socoto ee March.
“Waxaan shacbiweynaha Soomaaliyeed u sheegayaa inagoo ku kalsoon Ilaahay, ku kalsoon taageerada iyo garab istaagga mar walba aad Dowladda Somalia la barbar taagan tihiin in aynu ku matalno danta ummadda Soomaaliyeed, xaq iyo caddaaladna ku helno doodeenna iyo dacwaddeenna.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka.
Khadar oo uga mahadceliyey shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu garab taagan yihiin Madaxdooda iyo dowladdooda dacwadda hortaalla Maxkamadda Adduunka ayaa ugu baaqay dhammaan muwaadin kasta, gaar ahaan hormuudka bulshada in ay si dhow u gutaan doorka qaran ee kaga aadan difaaca baddeena, midnimo iyo wadajirna aynu ku wajahno damaca guracan ee Kenya.
Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka ayaa ugu hambalyeeyey Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo miro dhalka dacwaddan, si dhowna ula shaqeynayay khubarada sharciga iyo masuuliyiinta Soomaaliyeed ee dacwaddan gacanta ku haya.